injini yedizili yokutya umatshini ombane ukuqala kokutya okuneenqwelo moya
Ukwenza iipellets zeentlanzi, uninzi lwabantu luya kukhetha ukuntywila okutya okuneentlanzi. Njengoko intlanzi itya iipellets emanzini, akukho lula ukuba kutyiwe ngeentlanzi. Ngeli xesha, kungawuthintela ungcoliseko lomoya lokutya kweentlanzi. Iipellets zentambo yokutya edadayo ikhukhumala kukubumba isikhuselo esingezantsi kobushushu obugqithisileyo, ke kuyanyangeka kwaye kufanelekile ukuba kugxoxwe iintlanzi. Nangona sibiza olu hlobo lwe-pellet mill njengee-fish feed pellet extruder, nangona kunjalo, iipellets ezenziwe ngendlela yokuba zingasetyenziswa ngokutyisa izilwanyana kunye neeplanga ezahlukeneyo. Ububanzi bee-pellets ezisele zinokuba ngu-0.9-10mm njengoko ufuna. Ingaba luhlobo oluthantayo okanye uhlobo lokuntywila. Ukuba umyinge wesitatshi kwizinto ezingafakwanga ngaphantsi ungaphantsi 35%, ke iipellets ziya kuba zitywila emanzini.
Injini yedizili intlanzi yokutya eyongezelelweyo iqhutywa yinjini yedizili kwaye isebenza kwesi siseko.Omzi wefektala ubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokufa nge-0.9-15mm yeaperture, enokukhupha ngaphezulu kune 30 iintlobo zeepellets zokutya eziqhelekileyo. Umthamo uvela 30 kg / h ukuya kwiitoni ezimbini ngeyure. Ukwengeza, sikwabonelela ngeyona ndlela yokucinezelwa kweplate yokufa, ukuze ngalinye lamasuntswana owenzileyo abe egudileyo, iyunifomu kunye nokubengezela. Uyilo lobume besixhobo somatshini wokudibanisa iintlanzi wedizili sisayensi kwaye sinengqiqo, nendawo encinci yomgangatho kunye nengxolo ephantsi, iziphumo eziphezulu kunye nokusetyenziswa okuncinci kwamandla. Umgangatho wokubumba kwezinhlayiya ziphezulu kwaye umphezulu uqaqambile kwaye ucocekile, olulunge ngokugcina kunye nokuhamba. Ukusebenza kunye nokugcinwa kwezi zixhobo kulula, iphephile kwaye inokuthenjwa.kwaye kukhethwa ngokubanzi ziifama ezincinci okanye eziphakathi kunye neefama zokuvelisa iintlanzi. Isetyenziselwa ukucubungula izixhobo ezahlukeneyo zokutya okuziinkozo kwindawo ephezulu yokutya okuselwandle ngeentlanzi, izinja, ufudo, amasele, amaxhaka kunye namantshontsho, njl. Umatshini wokutya owondliweyo weefish, kwaye ke ubukhulu be-pellet buyahlengahlengiswa ngokweemfuno zakho zemveliso. Sikwabonelela ngomatshini wokutya iintlanzi wedizili ohambelana nokulima okuthe kratya nokufuya kweentlanzi.
Ukusebenza Umgaqo womatshini wokutya iintlanzi wedizili
1. Ukuhendwa: Emva kokungena kwi-extruder, Izinto kufuneka zenziwe kuqala. Kuyafana nenkqubo yokuhendwa komatshini wokutya iintlanzi wedizili, nto zombini ezihlaziyiweyo kunye eshushu kwizixhobo. Injongo yokucinywa kunye nokufunxwa kukonyusa ubushushu kunye nokufuma kwemathiriyeli ukwenzela ukuba kukhawuleziswe ukukhutshwa ngokukhawuleza kwezinto ngexesha lokukhupha elizayo.
2. Ukukhupha ngaphandle: Emva kokuzama, Izixhobo zingene kwisikreyi somkhenkcezisi wokufakelwa, Ubume begumbi elingaphezulu kancinane kancinane kancinane kancinane ecaleni kwento. Uxinzelelo lwezinto ezibonakalayo luyanda ngexesha lokuhamba, Ngelixa izinto ezikwi-screw conveyor extrusion patity zihamba kunye no-shear oqinileyo, ukuqubha kunye nokuxhuzula, Iqondo lokushisa lezinto landa kakhulu.
3. Ukudumba: Xa isixhobo sifikelela kwindawo yokuphuma kwesikere esihambisayo, uxinzelelo lolona lukhulu. Emva kokuncwina kwigumbi elongezelelweyo, Ingcinezelo inyamalala ngequbuliso, kwaye kwangaxeshanye, ubushushu kunye nokufuma kuphulukana ngokukhawuleza, eyenza ubungakanani bezinto ezibonakalayo zinyuke ngokukhawuleza kwaye banda.
4. Ukusika: Izinto ezingasetyenziswanga zinqunywe kwisayizi efunekayo xa ziqokelelwa kubude obuthile.
izibonelelo zomatshini wokutya iintlanzi wedizili
1.Isombulula ingxaki yokunqongophala kombane kwaye nombane awazinzanga, kwaye amandla esigaba esithathu akasetyenziswanga, kodwa iziphumo ziyafuneka.
2.Iintlobo ezahlukeneyo zeepleyiti zokufa kunye ne-0.3-15mm yeaperture, enokukhupha ngaphezulu kune 30 iintlobo zeepellets zokutya eziqhelekileyo.
3. Phambili kwinkqubo yokulawulwa rhoqo, Ngale nkqubo, inokuvelisa iipesenti ezahlukeneyo zobungakanani ngokutshintsha isantya.
4. Nazi 4 iintlobo zobumba ezihlangabezana nazo zonke iimfuno zobukhulu. Zikhutshwa ngokulula kwaye zitshintshiwe.
5.Umlawuli uxhunyiwe kwi-boiler, Izixhobo zingaphambi kokuba zibiwe ngokupheleleyo, ke umgangatho kunye nokusebenza kakuhle kweepellethi ngokuqinisekileyo kuphuculwe.
6. Umsebenzi ozinzileyo, inokusebenza ngokuqhubekayo.